I-china intengiso ephezulu yasetafileni yokuyila ukutya kwasetafileni kunye nabenzi bezinto kunye nabathengisi | UFUXINGYE
Ikomityi yekofu kunye neseti esetiweyo
Elisa ukumila kwethambo elitsha laseChina Iseti yesidlo sangokuhlwa eQhelekileyo
Indebe yeglasi kunye neseti yesosi, i-90cc ye-Espresso yeglasi yeNdebe ...
Uyilo oluDumileyo lwaBantwana oluDumileyo kunye nesipho sezinto
umbala we-glaze + wepeyinti yesandla yokuma kweseti
Emboss umbala glaze isidlo sangokuhlwa set-Round imilo
Best ethandwayo intyatyambo intwasahlobo uyilo tableware isidlo s ...
Amagqabi athandwa kakhulu kuyilo lwesidlo sangokuhlwa kunye nezinto zesipho
Eyona ndawo idume ngokuntywila yeentyatyambo yasetafileni kunye nezinto zezipho
Le ngqokelela yoyilo lwethu olutsha, ifayile ye- Intyatyambo yasentwasahlobo yinto ethandwa kakhulu kulo nyaka. Siyisebenzisa kwiseti yesidlo sangokuhlwa esinganeli ukutya kuphela sinokuhombisa ikhaya lakho. Olu dibana luyaziwa kakhulu kwihlabathi.
Yongezo eyoyikisayo kwingqokelela yakho yesidlo sangokuhlwa. Nokuba kukuzonwabisa okanye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kuya kukunika ukutya.
Olu luphawu oluphezulu lwesipho esisetiweyo kunye Intyatyambo yasentwasahlobo uthotho angenza ipleyiti, iseti yekofu, imagi, teapot, indebe nesosara, isitya sesaladi, itreyi yesandwich kunye nokuma kwekhekhe njalo njalo, ukuba uyayithanda le ndlela kodwa imveliso eyahlukileyo, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuze ufumane.
Iseti yesidlo sangokuhlwa inokulungiselela ukusetyenziswa kwabantu aba-4 okanye aba-6 okanye abali-12. Iza ekupakishweni kwezipho kwaye yenza isipho esinomtsalane esiya kukhunjulwa. Yonwabele!
Iinkcukacha eziphambili / Iimpawu ezizodwa:
Izinto eziphathekayo: i-china bone bone / i-bone bone china
Ubungakanani obahlukeneyo, uyilo olwenziwe ngokwezifiso kunye nelogo ziyafumaneka
Ifanelekile ukusetyenziswa kwemihla ngemihla
Inani elincinci liyafumaneka
Ii-odolo ze-OEM zamkelekile
10.5inch imilo ngeenxa zonke ipleyiti yesidlo sangokuhlwa
Ubungakanani: Dia 26.7 * H3.7cm
8inch imilo ngeenxa zonke ipleyiti
Ubungakanani: Dia 20.2 * H3cm
8inch imilo round isuphu ipleyiti
Ubungakanani: Dia 20.2 * H5cm
Ikomityi yemilo ethe nkqo engama-220cc nesosi
Indebe: Dia8.7 * H5.7cm
Isoso: I-Dia16 * H1.8cm
Indebe ye-90cc ethe nkqo kunye nesosi
Ubungakanani beNdebe: Dia5.6 * H6.7cm
Isoso: I-Dia12.8 * H2cm
Umgudu we-360ml we-ZD
Ubukhulu: Dia9 * H10.5cm
Sikhangele kude naphi na ukuze senze le ngqokelela intle. uphawu kunye nobuhle obungagungqiyo obuziswa zezi ntyatyambo ziya kwenza yonke incoko yakho emnandi yokuqalisa incoko. Ngaphandle kokumangalisa, yonke i-dinnerware yethu yeentyatyambo nayo isebenza ngokumangalisayo kwaye yomelele nayo!
Siyazi ukuba le ntetho ibalulekile, ngakumbi xa kufikwa kwimibhiyozo yesidlo sangokuhlwa kunye neembiza. Isidlo sethu sangokuhlwa senza into entle ukuba unesiqinisekiso sokufumana ukunconywa! Nokuba uyayonwabela imvakalelo yale mihla kunye neyelixesha okanye isitayile sendalo, ukhetha ukuba iindwendwe zakho zoyike xa uzinika isidlo sakho.
Iseti yokutya, sihlala sidibanisa ngezantsi.
6pcs 10.5inch diner ipleyiti
6pcs 8inch ipleyiti yesaladi
6pcs ipleyiti yedessert
20pcs isidlo sangokuhlwa
4pcs 10.5inch diner ipleyiti
4pcs 8inch ipleyiti yesaladi
4pcs ipleyiti yedessert
4pcs 220cc indebe + 4pcs saucer
18pcs iseti yesidlo sangokuhlwa
nawe ungadibanisa nayiphi na into oyifunayo kwaye ukhethe umbandela: i-porcelain, i-china yethambo elitsha okanye i-bone entle yase-china. ibhetyebhetye kwaye ixhomekeke kuwe.
Kuyacetyiswa kwi-DISHWASHER, MICROWAVE AND OVEN, Kulula ukuyicoca. Zonke iitafile zeetafile ziveliswa kusetyenziswa kuphela izinto ezinobuhlobo. Kukhuselekile ngokupheleleyo kwimpilo kwaye kulungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Sisipho esihle nesicingelwayo sokuzalwa kwabahlobo, iKrisimesi, uSuku lokuBulela kunye nezinye iintsuku ezingalibalekiyo. Bayakuchukumiseka yiminqweno yakho enyanisekileyo kunye neengcinga ezinobubele.
Ukupakisha: ibhokisi emdaka okanye ibhokisi yemibala, iNtshona Yurophu, iMpuma Yurophu, iTurkey, Middle East, Australasia, North America, Central / South America
Uhlobo lokuhlawula:L / C, T / T.
Igama Umba: amagqabi ayilelwe isidlo sangokuhlwa kunye nezinto zesipho
MOQ: Izinto ezingabodwa: Iiseti ze-1000pcs zokutya sangokuhlwa: iiseti ezingama-500
Ukupakisha: (1) ukupakisha ngobuninzi / ukupakisha komntu ngamnye / ukupakisha isipho ezikhoyo / ibhokisi yokupakisha umbala
(2) Njengoko ngokwemfuneko yakho
Ukusetyenziswa: Ihotele / irestyu / ikhaya / ikhefi
Isiqinisekiso: I-FDA, iLFGB,
Ixesha lokuhlawula: L / C, T / T-30% idipozithi, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa
Iimbonakalo: 1.Datha kunye neCadmium yedatha inokuhlangabezana neemfuno ze-USA kunye ne-Euro.
2. I-microwave kunye ne-dishwasher ikhuselekile.
3.Umgangatho olungileyo wemveliso kunye nobumhlophe, sinamandla okulawula umgangatho.
4. Isitayile esimibalabala esijongeka ngomhombiso omhle.
5. Uyilo lwakho kunye nelogo zinokusetyenziswa kwiimveliso zethu.
6. Ibhokisi ekhuselekileyo yokuthumela ngaphandle kunye neebhokisi zeposi nazo ziyafumaneka.
7. Zisetyenziswa kakhulu ekhaya, ehotele nakwiivenkile zokutyela.
Inkonzo yethu: Ixabiso lokuncintisana, umgangatho ophezulu, ukuhanjiswa okukhawulezayo, iinkonzo ezilungileyo
Egqithileyo Uyilo oluDumileyo lokuyilwa kwesidlo sangokuhlwa kunye nezinto zesipho
Okulandelayo: Uthotho lwegadi yelizwe
Iseti yaBantwana yokutya isidlo sangokuhlwa
Ukucwangciswa kwesidlo sangokuhlwa
Cwangcisa ifayibha isidlo
Iseti yeGlasi yeDinnerware
Iseti yeSidlo sangokuhlwa seRose
Iiseti zeRustic Dinnerware
Eyona ndawo idumileyo yoyilo lwesidlo sangokuhlwa seCactus kunye nesipho ...
Iphethini yasentwasahlobo kunye nehlobo, into yesipho, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla ...
Amagqabi athandwa kakhulu kuyilo lwesidlo sangokuhlwa kunye nesipho ...
Isuti yeCactus porcelain
Uyilo oluDumileyo lokuyilwa kwesidlo sangokuhlwa kunye nezinto zesipho